2018-04-25 @ 20:01 in Politika
Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena amin'izao fotoana izao. Ekena fa tamin'ny asabotsy 21 avrily 2018 no tena nisy gidragidra mivantana nandresen'ny mpitolona rehefa lany bala rivotra na fingotra sy baomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana ka nisy tamin'izy ireo raha nanavo-tena no nanapoaka basy nisy bala tena izy ka niteraka fahafatesan'olona. Nampiova endrika ny tolona izany toe-javatra izany ka tonga hatramin'ny fitakiana ny fialàn'ny filoham-pirenena.
Fantatsika rehetra anefa fa fangatahana hanao tatitra amin'ny vahoaka tamin'izay nitranga tamin'ny fampandaniana ny lalàna fehizoro momba ny lalàm-pifidianana no niandohany. Efa hain'ny depioten'ny TIM sy MAPAR, VPM-MMM ary Mahaleotena tsara ny zavatra hitranga, tamin'ny alalan'ny fikasana hanaovana izany tatitra izany ihany koa tany Toamasina, morontsiraka atsinanan'i Madagasikara.
Nitsapa ny halalin'ny rano ry zareo ny Asabotsy talohan'ity andro iray tafiditra ho ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara ity. Voasakana ny hetsika. Efa andro maromaro, nandritra ny fandaharana manokana navoaka fahitalavitra tsy miankina vitsivitsy (Tv Plus, Viva Tv, Kolo Tv) no nitenenan'ny Depiote Guy Rivo Randrianarisoa (voafidy tao Antananarivo Fahadimy) voalohany ny hanaovana tatitra eo an-tokotanin'ny Lapan'ny Tanànan'Antananarivo Renivohitra.
Mila tsaroantsika ihany koa fa nisy toe-javatra tsy mbola nahazatra ny teto an-tanindrazana koa tamin'ny andro nikasana hivoahan'ny fandaharana manokana notenenina tetsy ambony io. Mbola tsy afa-mampiely ny fandaharany manerana an'i Madagasikara, amin'izao fotoana anoratana izao, ny fampielezam-peo sy fahitalavitra tsy miankina, fa hitan'ireo izay manana famandrihana Canal+ manerana an'i Madagasikara sy ny Faritra kosa ny sasantsasany amin'izay eto Antananarivo. Anisan'izany ireo fahitalavitra telo voatonona etsy ambony ireo ka azo heverina fa efa voadinika tsara mialoha avokoa ny fanatontosana sy ny fampielezana ilay fandaharana manokana ho hita sy ren'ny olona maro manerana an'i Madagasikara.
Fantatra tsara fa tsy hitovy amin'izay mijery ny TVM (Fahitalavi-panjakana) ny hamaroan'ny mpijery raha afa-miditra manao fandaharana amin'izany TVM izany izay rehetra tsy manohana ny fitondrana HVM. Toy ny tsy misy izay feo rehetra ivelan'ny eo amin'ny fitondrana ho an'ny RNM sy ny TVM nandritra ny fitondran-dRajaonarimampianina (sy izay rehetra teo alohany). Ny hampielezana haingana ny vaovao manerana an'i Madagasikara anefa no tanjona ka tsy maintsy tadiavina ny fomba hanaovana izany. Soa izany fa nisy ny famandrihana mandoa vola isam-bolana Canal+ mba hahitana sy handrenesana ireo fampitam-baovao tsy miankina eto Madagasikara saingy nisy ny sampona tamin'ilay andro hivoahan'ny fandaharana manokana.
Tapaka tampoka tao amin'ny Canal+ ny fantsona rehetra avy eto Madagasikara na fahitalavitra izany na fampielezam-peo ny marainan'ny zoma 13 avrily 2018. Taitra ny maro ka na inona na inona antony nolazain'ny tao amin'ny Canal+ dia fikasana tsy hielezan'ny fandaharana hanerana an'i Madagasikara no tanjon'izany hoan'ny mpanara-baovao maro. Nilaza moa ny tao amin'ny Canal+ fa ny fifandraisana nankany Paris no fototry ny olana tamin'izany saingy tsy nohenoin'ny olona io antony io. Tafaverina tamin'ny laoniny ihany ireo fantsona tsy hita tampoka ireo minitra vitsivitsy monja mialoha ny tokony hanombohan'ny fandaharana. Dia hatreo aloha ny fitantarana androany mba hipetrahany ho tantara voasoratra.